Imaaraadka iyo Masar oo Xaalad dagaal geliyey dalka Suudaan kadib heshiisyo ay la gashay Turkiga. – Xeernews24
Imaaraadka iyo Masar oo Xaalad dagaal geliyey dalka Suudaan kadib heshiisyo ay la gashay Turkiga.
14. Januar 2018 /in WARAR/NEWS /von admin
Dowladaha Imaaraadka iyo Masar ayaa xaalad dagaal geliyay dalka Suudaan, kadib markii uu dalkaasi booqday madaxweynaha Turkiga, isla markaaha heshiisyo milateri iyo kuwo ganacsi ay kala saxiixdeen.
Arrintan oo ka cadheysiisay isbaheysiga Sacuudiga, Imaaraadka iyo Masar ayaa keenay inuu xumaado xidhiidhka Masar iyo Suudaan, kadib markii ay Suudaan dhowaan u yeedhatay safiirkeedii magaalada Qaahira, waxaana dalka Suudaan la geliyay xiisad iyo xaalad dagaal.
Dowladda Suudaan ayaa ku dhawaaqday xaalad degdeg ah markii dhaqdhaqaaqyo ciidan laga dareemay xuduudka ay la leedahay dalalka Masar iyo Ereteriya. Suudaan ayaa xidhay xuduudka ay la leedahay dalka Ereteriya, siiba Gobolka Kasalla.
Gobolka Kasalla ee xuduudka Suudaan iyo Ereteriya ayaa lagu arkay hub ay leedahay Masar oo saldhigyada ciidan ee Ereteriya la geeyay, taasoo dhaliyay in ciidamada Suudaan heegan la geliyo.
Waxaa hore xiisad colaadeed uga jirtay xuduudka dalalka Masar iyo Suudaan, iyadoo Suudana ay marar badan ku eedeysay Masar inay taageerto jabhadaha Daarfuur ee ku kacsan dowladda Suudaan, waxaana laba dal ay isku heystaan degaanka Xalayb ee xuduudka.
Masar ayaa dhowaan Itoobiya ka codsatay in Suudaan laga saaro wadahadalka ku saabsan Webiga Niil ee saddex geesoodka ah, taasoo uga sii dartay xidhiidhka xumaa ee Masar iyo Suudaan.
Booqashadii Madaxweynaha Turkiga ee Suudaan iyo heshiisyadii uu la saxiixday Suudaan oo ay ku jirto joogitaan milateri oo Turkigu ku yeesho Badda Cas ayaa keenay in Imaaraadka iyo Masar ay xaaladda ku sii adkeeyaan Suudaan.
Imaaraadka oo saldhig milateri ku leh Ereteriya oo taageero dhaqaale siiya Masar ayaa si weyn uga danbeeya ololaha lagu dhibaateynayo dalka Suudaan oo ku soo dhowaanaya Turkiga.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/01/Sudan-Albashir.jpg 392 696 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-01-14 11:21:432018-01-14 11:21:43Imaaraadka iyo Masar oo Xaalad dagaal geliyey dalka Suudaan kadib heshiisyo ay la gashay Turkiga.
Madaxweynaha Maamulka Somaliland oo magacaabay Agaasimayaal cusub. Dalka Jabuuti oo Samaysay beero casri ah